संविधान आफै लोकप्रिय हुँदैन - Pradesh Today
Homeविचारसंविधान आफै लोकप्रिय हुँदैन
संविधान आफै सक्रिय हुँदैन । संविधान आफै सञ्चालित हुँदैन । संविधान आफै कार्यान्वयन हुँदैन । संविधान आफै मर्यादित हुँदैन । संविधान आफै पालक हुँदैन । संविधान आफै विस्तारित हुँदैन । संविधान आफै फलदायी हुँदैन । संविधान आफै जनप्रिय हुँदैन ।
संविधान आफै सम्मानित हुँदैन । संविधान आफै साधक हुँदैन । यो संविधान न आफै कसैको अपनत्व बन्दैन । जसले यो संविधान बनायो । जसले यो संविधानको खाका तयार पा¥यो । जसले यो संविधानको संरचना बोध ग¥यो । जसले यो संविधानको सपना देख्यो ।
जसले यो संविधानको आधार तयार पा¥यो । जसले यो संविधानको स्वरुप कल्पना ग¥यो । जसले यो संविधानको विकल्प रोज्यो र खोज्यो, उसैले नै यसको सर्वाधिक सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्दछ र संविधानलाई लोकप्रिय बनाउनु पर्दछ । संविधान विश्वकै उत्कृष्ट किन नहोस् यो आफैमा स्वचालित हतियार, यन्त्र, तन्त्र, मन्त्र, जन्त्र, संयन्त्र र उपकरण पक्कै होइन ।
संविधानको विषयमा पछिल्ला समयमा जति विवाद, जति छलफल, जति बहस र जति निष्कर्ष गरेपनि यसको मर्म र भावना बुझ्ने भनेको नै संविधान निर्माताले नै हो । चाहे त्यो व्यक्ति होस्, चाहे त्यो सिङ्गो मुलुक तथा देश र राष्ट्र होस् ।
चाहे त्यो देश र मुलुक हाँक्ने शक्ति, व्यक्ति र समूह होस् । मुखले राम–राम जपेर संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । मुखले भजन गाएर संविधान उत्कृष्ट बन्दैन । मुखले चिल्ला कुरा गरेर संविधान सक्रिय हुँदैन ।
मुखले नानाथरी भाषण दिएर संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । यो संविधानलाई सम्बन्धित राष्ट्र र जनताले अक्षरश पालना गर्नुपर्दछ । संविधानमाथि खेलवाड गर्ने काम कसैलाई पनि छुट हुँदैन ।
संविधानको मर्म र भावनामा चोट पु¥याउने र ठेस लगाउने काम कसैका लागि क्षम्य हुँदैन । सरकारमा बस्नेलाई मनपरी र बाहिर बस्नेलाई वनभरी संविधान बन्दैन । संविधान सबैका लागि संविधान हो ।
यो संविधान ठूलाका लागि चैन र सानाका लागि ऐन पनि होइन । यो संविधान कुर्सीमा बस्नेका लागि खेतको धान र भुइँमा बस्नेका लागि विधान पनि होइन । यो त सबैको सर्वस्वीकार्य दस्तावेज हो ।
यदि सरकारले पालना गर्छ भने देशले पालना गर्छ । यदि नेताले पालना गर्द भने जनताले पालना गर्छ । यदि प्रधानमन्त्रीले पालना गर्छन् भने मन्त्रीले पालना गर्छन् ।
यदि मुलुकले पालना गर्छ भने सिङ्गो राष्ट्रले पालना गर्दछ । तसर्थ संविधान स्वीकार्य बनाउने काम सरकारको हो । संविधान बनाउँदैमा कसैले पनि आफूलाई हात्तीको रुपमा कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ । संविधान बन्ने निश्चित मापदण्ड र प्रक्रियाले हो ।
त्यो पूरा भयो र संविधान बनयो । संविधान बन्नु देशका लागि जादुको छडी पनि हुँदैन र समस्या समाधानको कडी पनि हुँदैन । संविधान देश र जनताको हितमा पुष्टि गर्ने कसले ? अहिलेसम्म देशमा बन्दै आएका र बनेका संविधानहरु देश र जनताले मान्दै आएका तर किन प्रगति र उन्नति हुन सकेन ? देश र जनताले मान्दैमा यो लोकप्रिय बन्दो रहेनछ । सिङ्गो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेर्ने भनेको त सरकार र त्यसमा संलग्न व्यक्ति,
शक्ति र समूह हो । आजको नयाँ लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक संविधानको पालना गर्ने तथा गराउने अहम् दायित्व र भूमिका कसको हो ? यो कुरा चिन्न, जान्न, बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ । कुनै पनि राष्ट्र वा मुलुकले देश र जनतालाई बाँध्नको लागि मात्र संविधान बनाएको हुँदैन र संविधान तयार पारेको हुँदैन ।
संविधानलाई विधिको विधान मानेर सरकार आफू त्यो बाटो कत्ति पनि नबिराई हिड्ने र देश र जनताका लागि काम गर्ने हो । सरकारले आफ्नो संविधान कार्यान्वयन हुने गरी रिठ्ठो नवि¥याई काम गर्ने र देश र जनताको उन्नति प्रगति हुने बाटोमा अघि लागेपछि मात्र जनताले यो संविधान मेरो, हाम्रो र हाम्रो राष्ट्रको भन्न थाल्दछन् ।
सरकार आफू हिडेको बाटोमा आजको संविधान टेक्छ कि टेक्दैन ? सरकार आफू हिडेको बाटोमा आजको संविधान स्मरण र्गछ कि गर्दैन ? सरकार आफू हिडेको बाटोमा आजको संविधान हेर्छ कि हेदैन ?
सरकार आफू हिडेको बाटोमा आजको संविधान प्रयोग गर्छ कि गर्दैन ? सरकार आफू हिडेको बाटोमा आजको संविधान आत्मसात् गर्छ कि गर्दैन ? यी सबै आजको यक्ष प्रश्नहरु हुन् । सरकारले जनतालाई सिकाउने होइन । सरकारले स्वयम्ले सिक्ने कुरा हो ।
आज देशमा बनेको सरकारले आजको लोतान्त्रिक संविधान जनताले नै लेखेका हुन् भनेर भन्दैछ भने फेरी पनि किन यो सरकारले आजको संविधान जनतालाई सिकाउन, बुझाउन, पढाउन र प्रशिक्षण दिन खोज्दैछ । यदि आजको संविधान जननिर्मित र जनलिखित हो भने त्यसको भाव र शार सरकारले आफैले जान्ने हो, अरुलाई बनाउने होइन ।
आज जनताले लेखेको संविधान सरकारले कहाँ, कसरी, कतिबेला, कुन रिति र भातिले प्रयोग ग¥यो र पालना ग¥यो ? भन्न सक्छ । जनताले लेखको संविधान आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेर लेखेका होलान् र ? जनताले लेखको संविधान आफ्ना लागि दाम्लो र नेताका लागि काम्लो बनाएका लेलान र ? जनताले लेखेका हुन् भने त आफ्नो सर्वोपरी हितका लागि यो लेखेका होलान त ?
देशको राजधानी काठमाडौँको संसद भवन सिंहदरबारको अति विशिष्ट हल तथा कक्षमा जारी भएको र घोषणा भएको संविधान आज देशका हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डोटी, दार्चुलाजस्ता विकट बस्ती तथा घरमा पुगेको छकि छैन ?
सुगम–सुगमका बस्ती तथा गाउँमा पुगेको छकि छैन भने दुर्गम–दुर्गमजस्ता गाउँ र बस्तीमा कसरी पुग्न सक्छ । एउटा संविधानको किताबसम्म पु¥याउन नसक्ने सरकारले सिङ्गो दरबार कसरी जनता समक्ष पु¥याउँछ ? सरकार निकै संवेदनशील बनोस् र सोचोस् कि आजको यो संविधान साँच्चिकै देश र जनताकै बनाउने कसरी ?
आजको सरकार, आजको नेता, आजको मन्त्री तथा आजको रक्षक जहिले पनि जनताले लेखेको उत्कृष्ट संविधान भनेर निकै कराए, कुलिए, उर्लिए, च्यातिए, भाँचिए, उफ्रिए, बुर्कुसी मारे, जे–जे गर्नुपर्ने हो त्यो–त्यो सबै गरे । तर यसकोको पक्षमा लागेर, यसको संरक्षणमा लागेर, यसको सम्वद्र्धनमा लागेर निष्पक्ष काम गर्न भने आजसम्म पनि सकेका छैनन् ।
सरकार के हो ? सकार कनि चुक्दै छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कसको हो । यसको लोकप्रियता र सर्वस्वीकार्यता बढाउने काम कसको हो ? आज जनताले लेखेको संविधान भन्न रुचाउने दल र नेताले आज जनताका हात–हातमा नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान छ कि छैन कहिल्यै हामीलाई सोध्यो ? जनताका हातमा एक थान संविधान हुने कि नहुने ?
जनतालाई एक थान संविधान चाहिने कि नचाहिने ? त्यो कुरा कसले बुझ्ने ? जनताले बनाएको संविधान भन्दैमा सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ ? यसको अपनत्व के हो ? यसको ओजन तह के हो श्र यसको व्यापकता के हो ? यसको स्वीकार्यता के हो ?
यसको लोकप्रियता के हो ? यो देशको लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक संविधान कसैका लागि नाम्लो र दाम्लो कसैका लागि काम्लो बन्न सुहाउँछ । यो देशको लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक संविधान कसैका लागि बाँध्ने किलो र कसैका लागि सुकिलो र मुकिलो बन्न सुहाउँछ ? संविधान बन्दैमा देश बन्ने विचार र धारणा कसको हो ?
संविधान बन्दैमा देश बन्ने विचार र धारणा कसको हो ? संविधान एउटा बाटो हो । त्यसमा हिड्ने को र हिडाउने को ? त्यसको ख्याल हुनुपर्दैन ? सधै देशको संविधानलाई उत्कृष्ट घोषणा गर्दै जाने, सधै देशको संविधानलाई विश्वको दर्जा दिदै जाने तर त्यही संविधानबाट देशको सरकार विकृत बन्दै जाने । यसको कुनै अर्थ छ ।
संविधानले निर्देशित गरेका कुरा पालना गर्ने पहिलो जिम्मेवारी कसको ? यहाँ बडो गजबको संस्कार के छ भने ‘संविधान बन्यो त सबथोक बन्यो । संविधान लेख्यो त सबथोक देख्यो र लेख्यो । आजसम्म देशमा कति पटक संविधान लेखियो र देखियो ।
यदि लेखेरै र देखेरै हुने भए किन कैयौं पटकका संविधान असफल भए ? यो कुराको हेक्का राख्ने कसले ? खाली संविधानका ठूला कुरा गरेर र संविधान बनेको दिनलाई मनाएर मात्र हुन्छ । देश र जनताका लागि संविधान दिवस (३६५) दिनै सक्रिय हुने कि एकदिन मात्र सक्रिय हुने ? सरकार संविधानका विषयमा कनि यसरी चुक्दै छ ? सरकारले यो संविधान आफ्ना लागि ठानेको छ कि छैन ?
आफ्ना लागि मानेको छ कि छैन ? यदि यो संविधानको लोकप्रियता आजको सरकार चाहन्छ भने आफ्नै हात, आफ्नै साथ र आफ्नै गाथबाट यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ कि चाहदैन ? पटक–पटक लोकतान्त्रिक संविधानका कुरा गर्दा आज देशमा संधिवान बनेको चार वर्षमा लागिसक्यो ।
यो चार वर्षमा संविधानप्रति हुनुपर्ने असल कुरा के–के भए र संविधानप्रति नहुनुपर्ने कमसल कुरा के–के भए ? किन सार्वजनिक हुन सकेनन् ? के आजसम्म सबै कुरा संविधानको पेरीफेरीमै रहेर भएका छन् त ?
सरकार कहाँ–कहाँ चुकेको छ ? जनताका लागि संविधानको मातहतमा रहेर के–के काम गर्न सक्थ्यौ र के–के काम गर्न सकेन ? त्यसको हिसाब किताब कसले बुझाउने ?
संविधानको किताब सिंहदरबारमा मात्र राख्ने कि तीन करोड नेपाली जनताको मन, मुटुमा राख्ने ? कुनै सरकारी कार्याल्य तथा सरकारी निकायमा मात्र संविधानको पहुँच र विस्तार हो ।
तीन करोड नेपाली जनताको घर–घरमा संविधानको किताब हुनुपर्ने कि नपर्ने ? जसको संविधान भनिएको छ त्यसको घरमा संविधानको ‘स’ पनि छैन र किताबको ‘क’ पनि छैन । किन, देखाउन लाज लागेर ? देशको नेता र सरकारले मात्र देख्ने, हेर्ने, पढ्ने पुस्तक हो, यो संविधानको पुस्तक ?
कसलाई चासो भयो ? कसलाई चासो भएन ? सरकारले किन चासो दिएन ? सरकारले किन जिम्मा लिएन ? यो संविधान हामीले हाम्रै लागि मात्र लेखेका हौँ भन्न सक्नुप¥यो ।
होइन भने जनताको संविधान जनताको हातमा नहुने ? देशको राजधानी काठमाडौँको संसद भवन सिंहदरबारको अति विशिष्ट हल तथा कक्षमा जारी भएको र घोषणा भएको संविधान आज देशका हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डोटी, दार्चुलाजस्ता विकट बस्ती तथा घरमा पुगेको छकि छैन ?
सुगम–सुगमका बस्ती तथा गाउँमा पुगेको छकि छैन भने दुर्गम–दुर्गमजस्ता गाउँ र बस्तीमा कसरी पुग्न सक्छ । एउटा संविधानको किताबसम्म पु¥याउन नसक्ने सरकारले सिङ्गो दरबार कसरी जनता समक्ष पु¥याउँछ ?
सरकार निकै संवेदनशील बनोस् र सोचोस् कि आजको यो संविधान साँच्चिकै देश र जनताकै बनाउने कसरी ? अति नढाँटी काम गरोस् कि संविधान विरुद्ध नजाने र नहुने गरी ।